MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EE XUDUUDAHA-AUSSIE DOG - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka ee Xuduudaha-Aussie Dog
Xudduudka Collie / Ueyaha Australiyaanka ah eeyaha isku dhafan
'Duke waa iskutallaab Soohdinta Collie / Adhijirka Ustaraaliya Waxaan helnay markii aan isku daynay inaan beddelno gacaliyeheenna Australiyaanka ah ee dhiig-kaca qaaliga ah. Duke ma ahan bedelkiisa wuxuu si buuxda ugu taaganyahay shaqsiyadiisa. Uma maleynayo inaan aad ugu diyaar garoownay qeybta Xudduudka Collie. Isaga tamar aan xad lahayn iyo xiisaha aan dhammaadka lahayn kuu oggolaan maayaan inaad la fadhiisatid eeygan. Dhinaca kore, isagu waa eeyga ugu caqliga iyo jawaabta badan ee aan abid arko. Iska iloow amarrada gacanta, wuxuu ku jawaabi doonaa jihada indhaha. Tani waa Ferrari eeyaha. '
Xudduudda-Aussie ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Adhijirka Ustaraaliya iyo Soohdinta Collie . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
Lexi eeyga isku dhafan ee Xuduudaha-Aussie (Border Collie / Australian Shepherd mix)
cas iyo cavalier boqorkii Charles cad spaniel
Xudduudka Aussie-buluugga weyn (Border Collie / Australian Shepherd mix ey
Buluug-indho Border-Aussie eey (Border Collie / Australian Shepherd mix ey ey)
Xuduudaha-Aussie eey (Xadka Collie / Australian Shepherd ey isku jira)
'Cully the Border-Aussie markii uu ku dhowaad 8 toddobaad jiray-hooyadiis waa Xudduud Collie loo yaqaan Blue, iyada mid isha buluug ah . Aabbuhu waa Adhijire Casaan ah oo reer Australia ah, Nash, yar yar, laakiin hal inji aad u dheer. Waxaan rabay nin madow iyo cadaan. Cully waa seddexley, laakiin ma suura gal aheyn inaan sawiro shaqadeyda midab jarista aniga lafteyda.
Waxaan lahaan jirnay Xudduudda Xudduuda markii aan ku soo barbaaray beer runti ahayd ey iyo xayawaan rabbaay ah oo shaqeeya. Waxay ahaayeen eeyo aad u gaar ah, xarago badan, qosol badan oo runtii caqli badan. Waan jeclaa iyaga! Labada nooc ee iskutallaabtan ku jira ayaa leh waxyaabo badan oo isku mid ah, ma hubo in Cully uu ka duwanaan doono kan Kulliyadaha Xuduudaha haysashada Aussie isaga. Waan ogahay inuusan heli doonin shaqooyin uu ku qabto hal hareerahayaga yar oo aan ugu noolaano sida eeyga guryaha eeyo eydayada shaqeeya ay leeyihiin! Waxaan qorsheynayaa inaan la sameeyo tababar dhaq-dhaqaaqa isaga waxaan rajeynayaa inaan awood u yeelan doono inaan ku tababaro IN AANAN eryan fardaha si uu u maro raad raac raacista aniga. Eeyahaani waxay u baahan yihiin kicin badan Cully, xitaa markay jiraan 2 bilood, waxay si fiican u caddeeyeen! Horey ayaan u arkay in a socodka subaxa waxay noqon doontaa mid sii kordheysa oo muhiim ah, laakiin way adagtahay marka dabeylku halkaan ku qaboojiyo halkan MN waxay hoos udhigeysaa eber subaxa qaar! Waxaan jeclaan lahaa inaan baro orod on treadmill ah kayd ahaan maalmaha cimilada xun. Wuxuu leeyahay dhammaan dareenka xoola dhaqatada wuxuuna si tartiib tartiib ah u baranayaa inuusan cidhibtooda digaagin. Runtii wuu calaliyaa, laakiin waxaan hubaa inay taasi sidoo kale ka sii fiicnaan doonto, illaa inta aan dadaalno oo aan siinno waxyaabo kale oo uu sameeyo! Ninkeygu wuxuu moodayay in gurigeena uu macquul ku ahaa a Basset Hound , laakiin waan ku faraxsanahay eyga aan u oomanaa sannado!
'Harlee isku-darka Xuduudaha iyo caddaanka ee Collie / Isku-duwaha Ustaraaliya ee jira 10 bilood ayaa noqday eey cajiib ah. Iyadu aad ayey u caqli badan tahay, dabeecad wanaagsan, eey daacad ah. '
'Kani waa isku-darkayaga Xuduudaha Collie / Australian Shepherd Harlee. Waxaan soo qaatay sawirkan iyada oo la ciyaareysa hooyadeed. Iyadu waa arday aad u qurux badan! Waxay ahayd qiyaastii 5 bilood jir sawirkan. Waxay jeceshahay in ay legdamo oo aad u ciyaarto!
'Harlee the Border Collie / Australian Shepherd mix at 3 bilood jir, oo ku nasanaya cawska ka dib galabnimadii ay la legdamayeen eeyga saaxiibkiis waxay ahayd qiyaastii 3 bilood.'
Feedhka bulldog faransiiska iskudhaf eeyo yaryar oo iib ah
'Harlee the Border Collie / Australian Shepherd mix at 9 weeks old, on her first of several safares from our home in Tulsa, OK to go to visit the so-law in Amarillo, TX' Harlee the Border Collie / Australian Shepherd mix at 9 toddobaad jir, markii ugu horeysay ee ay dhowr safar ka baxdo gurigeenna Tulsa, Waa hagaag in ay tagto sodohda Amarillo, TX
'Harlee the Border Collie / Australian Shepherd mix at 7 toddobaad jir, habeenkii aan helnay iyada. Waxay ahayd sida eey macaan !!! '
'Jade waa aroole / Xudduudo Australiya ah oo loo yaqaan' Collie 'oo isku qasaysa tamar ka badan inta ay ogtahay waxa lagu sameeyo. Waxaan u maleynay inaan qarinay kiishka cuntada bisada, laakiin sifiican ugama filna sida muuqata. Waxaan imid guriga madaxiisuna wuxuu ku dhegan yahay bacda faaruqa ah iyadoo aysan jirin wax caddeyn ah oo ku saabsan cuntada bisadda meel kasta. Waxaan bacda cunnada bisadda ku qarinay gabal alwaax ah oo ka sarreeya gurigeeda eyga. Bisaduhu way gaari karaan oo sida muuqata way kari kartaa. Way iska yar tahay laakiin waxay ka boodaysaa meel ka sareysa waxaan arkaa eeyo badan oo waawayn oo boodaya. Waxay wadataa kubbadda tennis-ka waxayna ku daadisaa gacantayda fursad kastoo ay hesho. Jade qof walba wuu jecel yahay waana ku faraxsanahay markii qof la hadlo. Markay is dejiso waxay jeceshahay inay isqabato oo sariirtayda sariirta gasho. Iyadu waa qof caqli badan oo caqli badan waxayna taqaanaa ereyo aad u tiro badan. Erayada ay ugu jeceshahay waa 'Daawee,' 'Gaari,' 'Kitty,' iyo 'Run / Walk' (aad ayey u jeclaan laheyd inay cararto). Way ka taxaddaraysaa hadda in aysan madaxeeda ku dhejin wax shandado ah, laakiin wali waxay jeceshahay inay wax cunto. Cunto intee le'eg baynu siin doonnaa sidii aannu ku siinnay. '
'Sawiradani waa seddexdii aan eey 9-wiig jir ahaayeen. Waxay yihiin iskudhafyada Australiyaanka ah ee Shepherd / Border Collie. Waxaa jira laba wiil (Taz iyo Pooh Bear) iyo gabar (Bailey). Taz waa midka madow iyo tacabirka. Pooh waa kan liinta waana hubaal inuu ugu macaan yahay. Bailey waa mid isku dhafan oo midabbo badan leh. Qof kastaa wuxuu ii sheegaa inaan ku waalanahay inaan helo saddex cunug hal mar laakiin ma aanan ku farxi karin iyaga. Sheekadu waa saaxiibkay oo maqlay nin ku siinaya eeyo yaryar jidka korkiisa sidaa darteed waxaan u aadnay inaan eegno iyaga si aan mid uun u helno. Markii aan halkaa tagnay waxay hayeen saddex, dhammaantoodna way noo soo ordeen iyagoo aad u qurux badan sida ay noqon karto. Waxaan go'aansanay inaan guriga u qaadno in muddo ah si aan u aragno sida ay ku sameyn doonaan eyga naga weyn kaas oo isku mid ah isku dhafka. Markii aan guriga ku helnay waxaan ogaanay inaanan dib u celin karin taasna waa taas. 'Jaceylka Aragtida koowaad.' Illaa iyo hadda waxay ahaayeen eyyo waaweyn, aad u jecel oo firfircoon. Waxay jecel yihiin in midba midka kale la ciyaaro oo midba midka kale la joogo shirkadiisa. In kasta oo intaas oo dhami ay tahay sheeko ka duwan markay tahay xilligeeda cashada. Waxa ugu weyn ee aan ka ogaaday iyaga ayaa ah inay had iyo jeer doonayaan waxa kale ee uu haysto. '
Pooh Bear, Bailey iyo Taz, Border Collie / Australian Shepherd oo isku dhafan eeyo yaryar oo 9 jir ah (Border-Aussies)
Sheela the Border-Aussie ey isku dhafan (Border Collie / Australian Shepherd mix) oo jirta 6 bilood - 'Waxay ka buuxsantay tamar, caqli badan oo aad u qosol badan!'
Sheela saddexda midab ee isku-dhafka ah ee Xuduudaha-Aussia (Border Collie / Australian Shepherd mix) eey yar oo jirta 3 bilood
Sheela the Border-Aussie mix ey (Border Collie / Australian Shepherd mix) eey yar oo 3 bilood jir ah oo la socota toy hamburger .
Liistada eeyaha isku dhafka ah ee 'Shepherd Mix' eeyaha
german adhijir feeder mix puppy
feer isku dhafka ah ee loo yaqaan 'cocker spaniel'
poodle iyo isku dane weyn
cur, af-madow / isku qas
eeyo dhaldhalaali ah oo dhadhamiya oo yar yar sii ahaada
Jarmal shorthair isku dhafka wax soo saarka dahabiga ah